आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ मङ्गलवारदेखि | गृहपृष्ठ
Home लगानी आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ मङ्गलवारदेखि
on: October 08, 2018 लगानी
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ मङ्गलवारदेखि
असोज २२, काठमाडौं (अस) । आयोजना प्रभावित स्थानियलाई आईपीओ जारी गरी बाँडफाँट गरिसकेको आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले मङ्गलवारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले छिटोमा असोज २६ र ढिलोमा कात्तिक ६ गतेसम्म १३ लाख ७६ हजार कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला गर्न लागेको हो । कुल कित्तामध्ये ६८ हजार ८ सय १ कित्ता सामूहिक लगानीकोषहरुलाई बाँडफाँट गरिएको र २७ हजार ५ सय २० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित राखिएको छ ।
आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले असार २७ गते स्वीकृति पाएको थियो । यस आईपीओमा खरीदका लागि न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ६ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस आईपीओ खरीदका लागि आस्बाको सदश्य लिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयहरुबाट आस्बा प्रणालीमार्फत शेयर भर्न सकिनेछ । आईपीओ विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले लिएको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीको आईपीओलाई कमजोर आधार जनाउने ग्रेड ५ ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ ।
धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा विद्युत उतपादन केन्द्र रहेको यस कम्पनीले आँखुखोलाको पानीबाट ८ दशमलव ४ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाबाट २०७० साल भाद ८ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन तथा विक्री गर्न शुरु गरेको छ । कम्पनीले भविश्यमा अन्य आयोजनाहरु पनि निर्माण गर्ने उदेश्य लिएको छ । हाल १ हजार १ सय ४९ जना संस्थापक शेयर सदस्यहरु रहेका छन् ।
कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार शेयर स्वामित्व संस्थापक तर्फ ७५ र सर्वसाधारण तर्फ २५ प्रतिशत रहनेछ । अधिकृत पूँजी रू. १ अर्ब १५ करोड रहनेछ भने जारी पूँजी रू. ८० करोड हुनेछ । कम्पनीको जारी पूँजीमध्ये संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कवुल गरेको रू. ६० करोड रहेको छ । स्थानिय र सर्वसाधारणको शेयर विक्री पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड पुग्नेछ ।